4 ဆေးဖက်ဝင်အပင်သဘာဝကျကျရင်ဝေဒနာတွေမှ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား သဘာဝကျကျရင်ဝေဒနာတွေဖို့ "4 ဆေးဖက်ဝင်အပင်
သဘာဝကျကျရင်ဝေဒနာတွေမှ4ဆေးဖက်ဝင်အပင်
Tele RELAY တစ်ခု 17 စက်တင်ဘာလ 2019
လူတိုင်း, တစ်ချိန်ချိန်, ရင်သဘာဝလမ်းဝေဒနာတွေတစ်ဦးသည်ကိုးကွယ်ရာရှာနေ။ နှင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ကျနော်တို့အစားအစာအပေါ်အနည်းငယ်အင်အားသုံးရှိစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်း့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအစာခြေစနစ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆောင်းပါးမှာပါကျနော်တို့သဘာဝကျကျရင်ဝေဒနာတွေမှသင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးကိုဆေးဖက်ဝင်အပင်ဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျအခြို့သောရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောအကြံပေးချက်များကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ အရှင်, သငျသညျဟင်းသီးဟင်းရွက်မူရင်းတာဟာသို့မဟုတ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူဖြင့်သင့်အစာခြေအီသက်သာရာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
1 ။ ဂျင်း
ပထမဦးစွာ ဂျင်းတဦးတည်းကိုနေ့စဉ်စားသုံးသင့်ကြောင်းဆေးဖက်ဝင်အစားအစာဖြစ်ပါတယ် ယင်း၏အများအပြားအကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများမှကျေးဇူးတင်စကား။ ကကြီးမြတ် Diuretics ဆီးနှင့်ရှင်းလင်းမှုဖြစ်သော်လည်းဤအမှု၌, ငါတို့ရင်ဝေဒနာတွေရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
လတ်ဆတ်ပြီးခြောက်သွေ့ဂျင်း၏စားသုံးမှု, ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် ကဲ့သို့သောနာကျင်ကိုက်လျှော့ချ လေ, မ်းဗိုက်နာကျင်မှု, ပျို့သို့မဟုတ်ဝမ်းလျှောအစာအိမ်အစာအိမ်နာ၏အမှု၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option ကိုဖြစ်ခြင်းများအပြင်၌။ သင်ကပြုတ်ရည်သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်ယူ, ဒါမှမဟုတ်အစာခြေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နှင့်စာရွက်၏အရသာကိုတိုးမြှင့်ဖို့အစားအသောက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
2 ။ အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်
ဒုတိယအကျနော်တို့ကမ္ဘာတလွှားယနေ့ခေတ်စားကြောင်းရှေးဟောင်းပျိုးပင်ကိုရည်ညွှန်း။ ဒါကဖြစ်ပါသည် အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်, တစ်ဦးဓါတ်တိုးအဖျော်ယမကာ, anticancer နဲ့ anti-inflammatory, catechin အတွက်၎င်း၏အကြောင်းအရာကျေးဇူးတင်စကား။
အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်ကောင်းသောအစာခြေကိုအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့ပျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့ဓာတ်ငွေ့လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလျော့ကျစေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ ထို့အပြင်၎င်း၏ပုံမှန်စားသုံးမှုကိုလည်းသွားယိုယွင်းတားဆီးခြင်းနှင့်သွေးသကြားဓာတ်နှင့်အလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချကူညီပေးသည်။
အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်ဖိန်းရှိပါတယ်ပါဝင်သောကြောင့်သို့သော်ကျွန်တော်အနည်းငယ်သောစပျစ်ရည်သောက်ရပါမည်။ ဤသည်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဘီယာအရက်ချက်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်သံများ၏စုပ်ယူမှုကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာမစားဘဲယူမှအကြံပြုလိုတယ်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်:6အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်အရေးကြီးသောအကျိုးခံစားခွင့်
3 ။ ပူစီနံ
Mint, လေ့ရင်သက်သာရာမှသတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ဦးဘီယာအရက်ချက်သည်။ အမှန်စင်စစ်လူများစွာမကြာခဏနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်အစာစားပြီးနောက်ကြောင့်လောင် pennyroyal။ လေ့လာရေးပြသ ဒီပြုတ်ရည်ဟာအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအနားယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်.
ဤသည်စက်ရုံ, တစ်လက်ဖက်ရည်အဖြစ်ကိုလောင်ခံရမှတပါး, ငါတို့သည်လည်းတစ်လိမ်းဆေးတစ်လက်နှင့်ခံတွင်းအဖြစ်ယင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကိုဆက်ကပ်။ သို့သော်စင်ကြယ်သောပုံစံအတွက်အလွန်နာကျင်ကျိန်းစပ်သည်နှင့်အစဉ်မပြတ်သင့်လျော်သောထုံးစံနှင့်အကြံပြုထိုးမှာရော, သတိနဲ့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်ရပါမည်။ ထို့အပွငျကနေခံစားနေရပြီးလူများအတွက်အကျိုးရှိသောမကျမည်အကြောင်း အစာအိမ်နဲ့-oesophageal reflux.
4 ။ သစ်ကြမ်းပိုး
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သစ်ကြံပိုးအများအပြားရောဂါများအတွက်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းအဖြစ်ရှေးခေတ်ကကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပြီးအခြားအပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချအခြားအမှုအရာတို့တွင်ခွင့်ပြုထားအခမဲ့အစွန်းရောက်စစ်တိုက်ခြင်း, သွေးထဲတွင်သကြားဓာတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သဘာဝကျကျခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆော်ခြင်း။
အစာခြေစနစ်အဖြစ်, သစ်ကြံပိုး အစာအိမ်အနာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရင်နှင့်အဆင်မပြေဝေဒနာတွေကကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသည်း function ကိုအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်အူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးကောင်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်Helicobacter pylori, ယနေ့ဒီတော့ဘုံ။
အဆိုပါဆေးဖက်ဝင်အစာခြေအစီအစဉ်တွင် ကျွန်တော်သစ်ကြံပိုး Ceylon အမျိုးမျိုးများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြု။ ကျနော်တို့တစ်လက်ဖက်ရည်အဖြစ်ယူ extract သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဝင်ငွေမှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသကြားလုံးနှင့်အချိုပွဲအမျိုးမျိုးတို့ကိုအတှကျအသုံးပွုဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စွပ်ပြုတ်, အသား, ဝက်အူချောင်း, sofritos စတာတွေအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပါသည်
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: 8 သစ်ကြံပိုးကျန်းမာရေးဖော်ကျူးရသေးတဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့
နေ့လယ်စာမှာအချိုပွဲ ယူ. နေ့လယ်စာသို့မဟုတ်ရေစာများအတွက် sugary အစားအစာများကိုစွန့်ခွာမထားပါနဲ့။
အီဆက်ရှိနေသေးခြင်းနှင့် ပို. ပို. ပြင်းထန်သောဖြစ်လာပါက, များအတွက်ဆရာဝန်ကိုသွား မည်သည့်အစားအစာကိုသည်းမခံဖယ်ထုတ်။
အခုတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်သိသော အကူအညီအစာခြေခြင်းနှင့်သဘာဝလမ်းအတွက်အချို့သောဘုံဝေဒနာတွေတားဆီး။ ထို့အပြင်ဤအကြံပြုချက်များကျနော်တို့မကြာခဏစသည်တို့ကိုရင်ပူ, ၌လည်းညှိုးငယ်ခြင်း, သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်လေ, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုမှခံရအထူးသဖြင့်လျှင်, အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
အောက်ပါဆောင်းပါးမှာတော့ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူသငျသညျအကောင်းအစာခြေဘို့ခရမ်းချဉ်သီးများပါဝင်သည်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အများအပြားအကြောင်းရင်းများကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ်။ Read more »
the post သဘာဝကျကျရင်ဝေဒနာတွေမှ4ဆေးဖက်ဝင်အပင် ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ.
ဖြတ်တောက်မှုနှင့်ခြစ်: တစ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးတစ်လက်ပညာရှိနှင့်ပျားရည် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - သဘာဝကျကျတုပ်ကွေးကုသရန်3ကုစားပျားရည်
အဆိုပါဘန်ဝစ်သတင်းစာ 17 2019 အောက်တိုဘာလ - ဗွီဒီယို